Saameynta ka dhalatay Roobabkii ka da’ay Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Iyadoo 24 saac ee la soo dhaafay Magaalada Muqdisho ay ka da’een roobab xoogan ayaa roobabkaasi waxaa ka dhashay saameyn uu ku yeeshay Bulshada ku nool caasimada.
Magaalada Muqdisho ayaa xilligaan waxaa la soo sheegayaa in qoysas badan oo Somaliyeed xilligaan ku go’doonsan yihiin guryahooda kadib biyo badan oo dadkaasi ku rogmaday guryahooda.
Biyaha ayaa ka rogmaday qaarkood laamiga danwadaagta oo dhawaan la dhisay, sidoo kale waxaa jira biyo iyaguna kasoo rogmaday xaafado kale oo degmada Wadajir ah.
Biyaha ayaa qiyaas ahaan ku dhaw yihiin Labo Mitir, guryo badanna ayee dumiyeen, qaarkoodna waa ay dhex fadhiyaan Biyaha sida dadka deegaanka ay Warbaahinta u sheegeen.
Intii dadka u suurta gashay ayaa la sheegay inay barakaceen halka kuwo kalena ay weli dadka qaar la yihiin si ay u baxaan.
“Guryaha lagama soo bixi karo, qofka fudud bes baa guryaha ka bixi kara, biyaha waxay burburiyeen guryo badan, waana arrin u baahan gurmad qaran.” ayuu yiri Maxamuud Cismaan oo ka mid ah dadka deegaanka
Xaafada Buulo Xuubey ee Degmada Wadajir, gaar ahaan Xaafadaha u dhaxeeya Ceel Qalaw iyo Isgoyska Danwadaagta ayeey dhibaatada ugu badan hada ka taagan tahay oo saameynta roobabka si aad ah looga dareemayaa.
DHAGEYSO:-Warka Duhur Starfm 19-06-2016